Indlela yokuhlala enhle ngemva kwe-50: izimfihlo zenkomba ye-May Mask eneminyaka engu-70 ubudala
Yena - imodeli eyaziwa kakhulu yama-80, isidlo sokudla okunomsoco oneminyaka engu-40 ubudala, umama we-multi-millionaire wengqondo i-Ilona Mask nogogo wabazukulu abangu-10. I-May Mask iyabukeka futhi inamandla, futhi iseluleko sakhe kwabesifazane silula futhi sinengqondo.
Ungakhohlwa ngemifino kanye nosawoti
Azikho eziningi zazo. Uma ungeke ulahlekelwe isisindo nganoma iyiphi indlela, uvame ukukhathala, uthola ukuphazamiseka - hlaziya ukudla kwakho. Cishe ngaso sonke isikhathi isizathu sokuthi awunalo izakhi zokulandelela ezidingekile - ungayinaki imifino yonyaka kanye nama porridges. Yidla izaqathi eziningi, ama-apula, i-broccoli ne-ulethisi, ungakhohlwa ngama-avocado namatamatisi, uhlanganise nabo nge-side dish yama-millet, ama-oat flakes, irayisi elibomvu, okusanhlamvu kwemboni - lokhu kudla kuyoba nemiphumela emihle kakhulu kulokhu, isikhumba nezinwele.
Lapho umuntu esekhulile, ukudla kungaba yingozi empilweni - noma kunjalo, njengokungabikho kwemingcele. Uma ungakwazi ukudla konke - akusho ukuthi kufanele ukwenze. Yiba nomthelela futhi ubheke ezinye izindlela: esikhundleni samaswidi ngezithelo noju, ukhilimu kanye nobisi lonke - ibhotela le-yogurt, i-espresso enamandla ene-caffeine. Kodwa ungalambile: ukwehlukanisa ukudla yisisombululo esihle kulabo abafuna ukuhlala bephilile.
Imithwalo yemoto izokunika ukuguquguquka, ukuhamba, i-vivacity, yenza isikhumba sishasha, futhi amehlo - akhazimule. Khetha ukuzivocavoca ngokomzimba ukunambitha: yenza ukuhamba okude nenja, sebenzisa isimiso se-TV esithakazelisayo-ukudlulisa, yenza ukufudumala kwe-rhythmic, kufaka phakathi amathrekhi akho owathandayo.
Izakhiwo zokwelapha nezomlingo we-apophyllite
Izimbangela zezinkinga ze-hormone kubesifazane
Isicelo samafutha abalulekile we-thuja
Kulungile kanjani ukulungiselela ukulethwa kokuhlaziywa?
Imfundo enonya njengenkinga yezokwelapha nezenhlalakahle
Ukuhamba kwemimoya engaphezulu nangaphezulu
Indlela yokugqoka stylishly ngo-2018 futhi ungasebenzisi imali eningi
UBuza, Nyusha noRudkovskaya badansa uLezginka ngoKadyrov, ividiyo
Izithelo jam kusuka apula omuncu
Ama-pancake we-Cottage cheese
Izitsha zokudla ezivela enkukhu yenkukhu
Sandwich nge-salmon usawoti kanye ne-avocado
Amaqebelengwane amaholide eholide nge-icing
I-fatale yowesifazane inganekwane noma ingokoqobo?
I-journalism yokuphenya ezwelayo: I-Jamala kabili yephula imigomo ye- "Eurovision 2016" (ividiyo)
Noma yini ofuna ukwazi ngezinwele?
Ziyini amachashazi abomvu emzimbeni?
Ingabe kufanelekile ukuphindiselela kulabo abenzi?
Uju njengendlela yokwelapha ngokumelene ne-cellulite